Yan Aung: ဘလော့ဂ်မှာ Music Player တင်ချင်သူများအတွက်…
ကျေးဇူးပါကိုရန်အောင်ခင်ဗျာ။ သီချင်းလေးတွေ ကောင်းကောင်းမသွင်းတတ်သေးတာနဲ့ အတော်ပဲခင်ဗျ။
ကိုရန်အောင်.. ကျေးဇူးပဲ ... အခု Blog မှာ Music Player တင်ပြီးသွားပြီ.....
Bro Yan Aung, I can't register in online storage , Please help me , do u have Ye` Lay's Songs , If so please give me URL please. Thanks! Please also visit our Blog
အစ်ကိုရေ....အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်...ကျွန်တော့် ဘလောဂ့်မှာတင်ထားလိုက်ပြီ။ ဒီထက်ပိုပြီး ဘလော့ဂ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေ မျှဝေပေးနိုင်ပါစေ။